#NABSHOWNY Save $100: NY POST PRODUCTION CONFERENCE, NAB SHOW NEW YORK & AES Exhibits XCHARX 2019 NAB Show News by Broadcast Beat. Official Broadcaster of NAB Show, Producer of NAB Show LIVE
Home » Featured » #NABSHOWNY Manavotra $ 100: NY POST PRODUCTION CONFERENCE, NAB SHOW NEW YORK & AES dia maneho
#NABSHOWNY Manavotra $ 100: NY POST PRODUCTION CONFERENCE, NAB SHOW NEW YORK & AES dia maneho
Ny fotoana dia mbola omena ny $ 100 mialohan'ny fivoriana 2 andro tsy tapaka (matetika $ 895) amin'ny fampiasana ny code PP27. Ity tolotra ity dia mihatra amin'ny 9.13.2018 (eny, izany anio). Noho izany ireo mpangataka izay miaina amin'ny ankamaroantsika, dia ity no fotoana farany ahafahanao manavotra $ 100.00 ary hampiasa izany vola izany ho an'ny fantsom-pisakafoanana any afovoan-tanàna. Go Here: www.nabshowny.com/conference/postproduction-conference-nyc
#NABSHOWNY Mipetraka ny 2018 Oktobra 17th-18th ao amin'ny Javits Center NYC ary feno harena. Ny fandaharan'asam-pandaharana manokana, ny fihaonambe, ary ny fivorian'ny Post Production Conference dia manana atrikasa vaovao miavaka toy ny: HDR Video Essentials / Tolo-kevitra ho an'ny Premiere Pro sy Media Composer, ary ny fiakarana amin'ny Premier Pro! Ny fiakarana mankany amin'ny fanofanana dia novolavolaina tamina fiaraha-miasa Fomba fifandraisana amin'ny hoavy, izay hitondra anao amin'ny dingana fampiofanana natokana ho an'ny mpiseraseran'ny mpampiasa azy, anisan'izany ny horonantsary, TV, ary ny horonan-tsarimihetsika, ny horonan-tsary mpandrindra, ny kolontsaina ary ny mpamokatra. Aza adino koa ny New York Broadcaster of the Year, David Muir, ABC World News Tonight Anchor amin'ny tetikasam-pifaneraserana izay hampahafantatra sy hahaliana.
Hahazo fanazavana bebe kokoa amin'ny andro ho avy izay mitondra ny Big Apple Kat Show hetsika. Aza mijanona amin'izay! The Broadcast Beat Ny ekipa mpilalao horonantsary dia manerana ny kianja fivoriambe manangona fanadihadiana maro isan-karazany izay tsy maintsy mahita ny matihanina amin'ny sehatry ny indostria. Ataovy azo antoka ny mijery ny horonan-tsarimihetsika nasongadina ho fampahalalana izay hanamafisana ny fahatakaranao ireo mpitarika manana ny lanjany sy ny indostria amin'ny teknolojia!
Ity misy fijery avy amin'ny 2017 #NABSHOWNY:
About Kat Show New York
Navoakan'ny Fikambanana Nasionalin'ny Fampielezampeo ary niara-nipetraka tamin'ny Audio Engineering Societyny fivoriamben'ny East Coast, Kat Show Ny New York dia hotontosaina amin'ny Oktobra 17 - 18, 2018 ao amin'ny Javits Convention Center. Miaraka amin'ireo mpanatrika 14,000 sy 300 +, Kat Show Ny New York dia manolotra ny tsara indrindra amin'ny teknolojia manaraka ho an'ny fampahalalam-baovao, ny fialamboly ary ny mpandraharaha amin'ny telefaona miaraka amin'ireo fihaonam-be sy atrikasa mifantoka amin'ny fahitalavitra, horonan-tsary, zanabolana, horonantsary an-tserasera, hetsika mivantana, podcasting, dokam-barotra, orinasa A / V, famokarana ary lahatsoratra.
Ny National Association ny ireo fahitalavitra dia ny Praiminisitra ho an'ny fikambanana mpiaro ny Amerika ireo fahitalavitra. Kat mandroso radio sy ny televiziona ny tombontsoa amin'ny mpanao lalàna, fitsipika ary bahoaka ny raharaha. Amin'ny alalan'ny fisoloana vava, ny fanabeazana sy ny zava-baovao, Kat dia manome fahafahana ireo fahitalavitra mba hanompo ny fiaraha-monina tsara indrindra, hanamafy orina ny orinasa sy haka fahafahana vaovao ao amin'ny vanim-potoana nomerika. Mianara bebe kokoa ao amin'ny www.nab.org.
Beat Broadcast dia ny Ofisialin'ny fahitalavi ny 2018 Kat Show Las Vegas ao sy ny Mpanao ny Kat Show LIVE. In 2017, Kat Show LIVE nahazo 1.3 tapitrisa mahery mpijery aterineto sy nandritra ny 2018 Kat Show, Isika dia antenaina ny mpijery mihoatra ny 1.5 tapitrisa.
Matio efa niasa tany na ny sehatra tsy miankina sy ny fampianarana ambony nandritra ny roa-polo taona. Specializes izy eo amin'ny sehatry ny haino aman-jery nomerika fitantanana tetikasa, nandefa injeniera sy ny haino aman-jery famokarana. Matio manana fahalalana be dia be amin'ny famokarana lahatsoratra nomerika, Hafanàm-po an-pananana fitantanana, Hafanàm-po an famokarana sarimihetsika, ary ny fandefasana toerana fampidirana. Mr. Harchick mavitrika fikarohana toetry ny fampitana ny zavakanto, Hafanàm-po an-tsisin'ny nanapaka sarimihetsika sy marani-tsaina peo sary teknolojia ho an'ny mpanjifa sy ny fampiharana tsy ampy ho an'ny fifampidinihana zavatra ilaina.
Matt sy ny fianakaviany amin'izao fotoana izao mipetraka ao amin'ny Washington, DC Metro area.
Posts by Matt farany Harchick (jereo rehetra)
Alan Alda to Receive the NAB 2019 Distinguished Service Award - Janoary 22, 2019
The Las Vegas SuperMeet Bids Farewell - Janoary 17, 2019
Ny iray sy tokana, Robert De Niro Opening Keynote #NABSHOWNY - Oktobra 8, 2018
2016 Kat Show 2016 Kat Show Job Fair 2016 Kat Show News Fampitana Beat Awards Fampitana Beat Magazine fampitana injeniera fampitana Engineering Fifanarahana ireo fahitalavitra Broadcasting Fifanarahana isovideo, viarte, HDR, tabataba fampihenana, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, bitrate fampihenana, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw Kat 2015 Kat 2016 Kat Show Kat Show 2016 Kat fampisehoana Careers Las Vegas Kat Show Kat Show Registration NAB16 nabshow National Association ny ireo fahitalavitra Show	2018-09-13
Previous: Sohonet dia manambara ClearView Flex Mandeha miasa amin'ny fiaraha-miasa azo antoka
Next: Ny Grass Valley sy ny Populous dia afaka manampy ny kianjan'ny Esports Arlington Texas mba hanomezana traikefa mahatalanjona avy amin'ny fakantsary ho an'ny console
Alan Alda to Receive the NAB 2019 Distinguished Service Award
Calling Kat rehetra Show Foodies: Las Vegas Toeram-pisakafoanana! #NABShow
Archives Select Month Janoary 2019 (183) Desambra 2018 (243) Novambra 2018 (406) Oktobra 2018 (496) Septambra 2018 (495) Aogositra 2018 (397) Jolay 2018 (876) Jona 2018 (869) May 2018 (871) Aprily 2018 (831) March 2018 (779) Febroary 2018 (684) Janoary 2018 (605) Desambra 2017 (396) Novambra 2017 (712) Oktobra 2017 (835) Septambra 2017 (608) Aogositra 2017 (583) Jolay 2017 (710) Jona 2017 (543) May 2017 (621) Aprily 2017 (695) March 2017 (704) Febroary 2017 (340) Janoary 2017 (364) Desambra 2016 (606) Novambra 2016 (344) Oktobra 2016 (556) Septambra 2016 (622) Aogositra 2016 (1056) Jolay 2016 (532) Jona 2016 (414) May 2016 (505) Aprily 2016 (713) March 2016 (743) Febroary 2016 (382) Janoary 2016 (123) Desambra 2015 (357) Novambra 2015 (327) Oktobra 2015 (152) Septambra 2015 (259) Aogositra 2015 (440) Jolay 2015 (276) Jona 2015 (140) May 2015 (128) Aprily 2015 (435) March 2015 (289) Febroary 2015 (298) Janoary 2015 (131) Desambra 2014 (103) Novambra 2014 (194) Oktobra 2014 (149) Septambra 2014 (381) Aogositra 2014 (250) Jolay 2014 (287) Jona 2014 (363) May 2014 (231) Aprily 2014 (744) March 2014 (560) Febroary 2014 (427) Janoary 2014 (289) Desambra 2013 (137) Novambra 2013 (545) Oktobra 2013 (290) Jolay 2013 (26) May 2013 (13) Aprily 2013 (1) March 2013 (2) 0 (306)
Janoary 22 @ 10: 00 pm - Janoary 24 @ 4: 00 am
Febroary 26 - Febroary 28
Aprily 6 - Aprily 11
Fampitana India Show
Oktobra 17 - Oktobra 19
Mahaleotena Graphic Designer
Ny Broadcast Beat no sehatra ofisialy Kat Show tany Las Vegas, Kat Show New York sy ny mpamokatra Kat Show LIVE. Isika ihany koa ny Affiliate Video of BroadcastAsia any Singapore ary namokatra ny 3 taona farany nandefasana azy SMPTE in Los Angeles.
Copyright 2018 Magazine Broadcast Beat, LLC. Zo rehetra voatokana. Famantarana rehetra sy ny zon'ny mpamorona niseho Izao no ny fananan'ny tompony ny tsirairay.